Raya Sader sy ireo ravina tropikaly goavambe an-taratasy | Famoronana an-tserasera
Vao omaly isika no nanana ny Disney Charities sary an'ohatra namboarina tamin'ny taratasy, tamin'ny volana septambra lasa teo ny Tanan'i Jo Chorny, Paperholm amin'ny maha tanàna iray manontolo sy kely vita an'ity fitaovana ity na "Music is the voice of the fanahy" toy ny sanganasa vita Taratasy quilling na taratasy filigree, toy ny santionany isan-karazany amin'ny mety misy mahazo mamorona miaraka amin'izany fitaovana izany toy izany matetika eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Ho an'ity zoma ity dia manana isika mpanakanto Venezoeliana / Libaney fa mipetraka any Barcelona izy ankehitriny ary manana taratasy ho iray amin'ireo fitaovana tiany amin'ny fampiasana ilay cutter. Raya Sader dia mamorona ravina tropikaly goavambe amin'ny taratasy miaraka amina endrika mahafinaritra sy fanoloran-tena lehibe araka ny ahitanao ireo sary omena amin'ireo tsipika ireo.
Una andian-taratasy izay nitarihany azy ireo voalohany ary avy eo notapatapahiny tamin'ny faratampony lehibe sy namaranany ny asa tamin'ny antsipiriany tamin'ny alàlan'ny takelaka. Miaraka amin'ity fitaovana ity dia afaka manome endrika ilaina izy mba hamoronana indray ny endrik'ireo ravina tropikaly lehibe ireo.
Amin'ity fomba ity manandrama maneho ny hatsaranao voajanahary amin'ny alalàn'ity fitaovana ity, izay taratasy sy zavakanto. Tsy mijanona ao amin'ireo ravina tropikaly goavambe fotsiny ihany izy io, fa mamokatra karazana karazany maro hafa koa, betsaka amin'ireo hazo mihintsam-bolo izay hitantsika any amin'ny tany eropeana ary efa mahazatra antsika kokoa.
Miaraka amin'ny karazan-kira rehetra eto an-tany, dia mahafinaritra antsika i Sader amin'ny ravina hazo isan-karazany ka andao hanaraka azy amin'ny fizotrany mamorona amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy Instagram. Ity dia iray amin'ireo tambajotra ahafahantsika mahita ny karazana fomba fanehoana zavakanto izay manandrana miavaka amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny tiana, koa aza manemotra ny fijanonana eo Sader.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ravina tropikaly goavambe an-taratasy nataon'i Raya Sader
Saka goavambe sy sariaka an'i Yuno